Taariikhda way soo laabataa: Arrin France ka qabsatay Algeria oo mar kale lagu arkay doorashadii Somalia - Caasimada Online
Home Warar Taariikhda way soo laabataa: Arrin France ka qabsatay Algeria oo mar kale...
Taariikhda way soo laabataa: Arrin France ka qabsatay Algeria oo mar kale lagu arkay doorashadii Somalia
08 February waxaa Soomaaliya ka dhacday doorasho aysan jirin cid saadaalineysay inuu Farmaajo kusoo bixi doono maadaama ay dowladaha dariska ah wateen musharixiin kala duwan Balse Farmaajo Wuu ahaa shaqsiga kaliya ee Soomaalinimo muujin karay.
Haddaba waxaa laga tagi karin oo aan la dafiri karin in taariikhda ay dib usoo laalaabato lana arko waxyaabo horey loo soo maray oo haddana dib usoo Noqdo, waxaana taas tusaale cad kuugu filan in Doorashadii Soomaaliya ka dhacday laga dhex arkay arrin weyn oo dhacday sanado badan ka hor xilligii uu France gumeysiga ku qabsaday dalka Algeria oo dhaco Waqooyiga Africa.
Madaxdii daba dhilifka aheyd ee Algeria, kuwii France u dhashay ee meesha joogay ayaa dowladda France usoo gudbiyey inay gacanta ku dhigeen Algeria isla markaasna ay dhaqankii islaamka ahaa ku badaleen mid gaalo oo la mid ah Tan Paris.
Xilligaas ayaa waxaa dhacday in Madaxda dowladda France iyo dad u shaqeenayey Balse watay maqaarka Algeria ay soo diyaariyeen xaflad weyn oo ka dhacday Magaalada Paris wuxuuna ujeedka ugu weyn ahaa in halkaas lagu soo bandhigo in Algeria laga dhameeyey ama laga suuliyey dhaqankii islaamka isla markaasna laga hirgeliyey dhaqanka Paris.
Qodobada ugu weyn oo ay cuksanayeen France ayaa waxaa ka mid ahaa in dadka lagala dagaalamay masaajidda iyo Kitaabka Qur,aanka Kariimka Balse kuma aysan fakarin in qur’aanka uu Alle Ilaashado waxayna midaas kusoo baraarugeen intii ay socotay xafladda.
Xafladda oo ka koobneyd Dhawr qeyb ayaa waxaan kasoo qaadaneynaa qeybta aan faaladaan kaga hadleyno ee mid la mid ah lagu arkay doorashadii Soomaaliya ka dhacday.
Waxaa xafladda loo diyaariyey gabar Muslim ah oo kasoo jeeday dalka Algeria taasoo la rabay in lagu muujiyo in gabdhaha u dhashay Algeria ay ka tageen dhaqankii islaamka sidoo kalana ay qaateen midda dhalanteedka ah ee ka jirto Paris.
Gabadhaan ayaa waxaa lagula balamay inay iyadoo qaawan kasoo baxdo qol kamid ahaa meesha xafladadda ka dhaceysay oo lagu diyaariyey iyadoo markii horana meesha lagu xareeyey iyadoo aan asturneyn una labisan sida gabadhaha Paris oo kale.
Alle awoodiisa habeenkii ka horeeyey xafladda ayaa waxaa maskaxda gabadhaan lagu soo riday inay xafladda dhinac kale u rogto oo ay muujiso in weli ay Algeria ka jirto dhaqanka islaamka isla markaasna aan la baabi’in karin.
Gabadhaan ayaa boorsadeeda kusoo ridatay dhar asturan oo muujinayo dhaqanka islaamka waxayna go,aan ku gaartay inay xirato dharkaas marka xafladda looga yeero oo ay maqasho magaceeda.
Sidii ay xafladda usoo socotay waxaa lasoo gaaray booskii gabadhaan waxaana dadkii xaflada kasoo qeyb galay loo sheegay in hadda loo muujin doono inuu is badalay dhaqankii dadka Algeria loogana yeeri doono masraxa gabar u dhalatay Algeria oo qaawan wadatana dhaqanka Paris.
Dadkii joogay xafladda oo ay ku jireen madaxdii ugu sareysay France, qaar ka socday madaxadii maqaar saarka ahaa ee Algeria ayaa mar qura indhaha ku taagay dhinaca laga sugayey inay gabadhaan kasoo baxdo.
Halmar ayaa waxaa is badalay dareenkii xafladda, madaxdii labada dhinac ayaa waxaa kasoo haray indho taag, maalintii ayaa noqotay Habeen, Saacadiina waxay noqotay Maalin markii ay masraxa soo istaagtay gabadhii la sugaayey oo xiran dhar asturan oo ay ka muuqatay islaanimo.
Waxay noqotay geesiyad uu Alle qalbigeeda badalay, waxay qalbiga u qaboojisay Muslimiin badan iyadoo madaxa Burus uga dhufatay dowlado badan oo aan islaam aheyn waxayna taariikhda ka gashay baal dahab ah oo aan marnaba mugdi noqon doonin.
Markii ay sidaas dhacday waxaa hadlay madaxdii France ugu weyneyd waxayna bilaabeen inay ku qeeliyaan kuwii usoo gudbiyey warkii ahaa inay badaleen dhaqankii islaamiga ahaa ee Algeria waxayna waydiiyeen sababta ay sidaan ku dhacday.
Mid Kamid ah madaxdaas ayaa halkaas adduunka ugu reebay farriin qiiro laheyd oo ay weli adeegsadaan muslmiinta isla markaasna noqotay gaashaan weyn, wuxuuna ku yiri madaxdii France Halkaan Weedh:
ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟
oo Af-Soomaali ahaan noqoneyso : ” Maxaa Sameeyaa Haddii uu Qur’aanka ka awood badan yahay dowladda France?”!!!!!!!.
Haddaba dhacdadaas waxay dhacday waqti ku dhawaad laga soo wareegay 128 sano haddaba waxaa mar kale laga arkay xarunta ay ka dhaceysay doorashada, maadaama la ogaa in dowladaha dariska ah iyo kuwa aan dariska aheyn ee kasoo horjeedo midnimada Soomaaliya soo garab istaageen musharixiin ay doonayeen inay u fuliyeen danohooda balse midaas Alle awoodisa ma aysan dhicin waxaana doorashada kusoo baxay Hoggaamiye dhab ah oo laga rajeenayo inuu ka shaqeeyo midnimada Soomaalida oo ah kuwa 100% Islaam ah, midnimadaas oo durba kasoo muuqatay Gobolada Kala Duwan Ee Soomaaliya.
Haddaba Markii la xaqiijiyey in doorashada uu ku guuleystay Farmaajo welina aysan dhammaan xafladda ayaa la arkayey ajaanibtii oo isaga qulqulayo xarunta doorashada taasoo micnaheedu aheyd inaysan ku faraxsananeyn waxa meesha ka dhacay oo ay tahay wax aysan ku fakareyn.
Haddaba aqriste miyeysan taas la mid aheyn niyad jabkii ku dhacay Madaxdii France ee doonayey inay si been abuur ah usoo muujiyaan inuu is badalay dhaqankii islaamiga ahaa ee Algeria waxaana meesha ka dhacday :
ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من دول الجوار والغربيين
oo iyadana aan sidaas tii hore uga fogeyn macno ahaan oo noqoneyso: ” Maxaa Sameeyaa haddii uu qur’aanka ka weyn yahay dowladaha dariska ah iyo kuwa reer Galbeedka ah?!!!!!!”.
Waxaa Qoray: Cabaas Cali Xasan (Xaliye) oo ah falanqeeye siyaasadeed